(1) Understanding AARTO - Driver Training | UpSkill Academy
IINKQUBO YE-AARTO YAMANQAKU EDEMRI OKANYE AMANQAKU OKWELISWA
UQEQESHO LOMQHUBI WOMNTU
iiZimphumo ezakhlukeneyo zonkungawuthobeli umthetho
Ukuqonda iinketho ezikhoyo kwisimo ngasinye
Kwenzeka ntoni xa omnye wabaqubhubi bahko enqunyanyisiwe
Abiwa njani amqaku la
Ukwehliswa kwamanqaku edemeri okanye awokwehliswa
Umthetho oLungisiweyo we-AARTO kunye nenkqubo ye-demerit point sele isondele kwaye ibeka isoyikiso esibi!
Ngaba ubaqeqeshe abaqhubi bakho?
Umthetho, uchaza inkqubo enxulymene nokugwetywa kwimeko yolwaphulo-mtheto, ukumelwa iileta zembeko, kunye nokunyanzeliswa kokusilela ekuthobeleni iimfuno.
Ngaphaya koko, lo Mtheho ucacisa iinkqubo ezinxulumene newaranti, ukuvavanywa kwenkqubo, kunye nenkqubo yenqanaba labo bangathobeliyo.
Le kosi sisisombululo esigqibeleleyo esinokuphazamiseka okuncinci kodwa impembelelo enkulu.
Ikosi iyakhawuleza ukugqiba, ipakishwe lonke ulwazi olufunekayo kunye nekhweshine ehleliwey kunye nesatifikethi sokugqitywa njengobungqina boqeqesho kunye nokuthotyelwa.
Kule modyuli sijongana nesishwankathelo se-AARTO, xa yathi yasayinwa ukuba ibe ngumthetho kunye nesizathu sokuba iphunyezwe.
iiNkqubo yokugweba imicimbi ye-AARTO
Ukuba abasebenzi bakho bolawulo abayiqondi inkqubo yokugweba, oko kuya kubangela ukuba ube noxanduva lokuhlawula ukwaphulwa komthetho ongakwaziyo ukukuthumela kwenye indawo.
iiNkqubo ye-AARTO yamanqaku edemri okanye amanqaku okwehlishwa
Kule modyuli sigubungela xa amanqaku akhutshwayo abiwa, ancitshiswa njani kwaye ungawajonga njani amanqaku.
Sichaza ifomo ze-AARTO
Ukuba i-AARTO Representation okanye i-Nomination form ayigcwaliswanga ngokuchanekileyo inokulibazisa inkqubo yakho..
Inlela ezingamanQanaba Okanye Izigaba
Ukuphunyezwa ngezigaba kunye nendlela inkqubo ye-intanethi esebenza ngayo.
.i-AARTO iya kohlwaya amashishini kunye nabaqhubi bezithuthi abanetyala lokwaphula umthetho wendlela ngokubeka amanqaku angafanelekanga. Nje ukuba kugqithiswe umda wamanqaku, iphepha-mvume lokuqhuba liyanqunyanyiswa kangangeenyanga ezintathu kwaye emva kweeofisi ezintathu liya kucinywa. Oku kuya kuba nefuthe elikhulu kwiinkampani ezinezithuthi okanye abasebenzi abaxhomekeke kwiilayisensi zabo zokuqhuba ukuze bafezekise imisebenzi yabo. Izithuthi zenkampani yakho nazo aziyi kuhlawulwa kuwo nawaphi na amabango e-inshurensi ukuba abaqhubi bakho banqunyanyisiwe iilayisensi.
Lungiselela namhlanje kwaye uqiniseke ukuba unazo zonke iinkqubo zakho kunye nemigaqo-nkqubo endaweni.
Le khosi icetyiswa kubo bonke abasebenzi be-HR, abaphathi bezithuthi kunye nabasebenzi bolawulo oluhle. Sinesixhobo soqeqesho esahlukileyo kwiinkampani zoqeqesho lwabaqhubi
"You have developed the only comprehensive online Aarto courses for HR, administration staff, and drivers. Due to Covid, e-learning is the best and only solution for companies as your employees can now do the course anytime and anywhere while staying safe.
"This course has assisted me with implementing a system to manage the fines received and ensure I redirect them in time. Understanding the timeline and the forms that I need to complete makes my work easier"
"As a proxy of a commercial bank I receive hundreds of fines every month. This course has assisted me in ensuring that I understand the process and what our administration team has to do to keep our company safe from the risks."
078 082 8365
...or follow us on social media
Copyright UpSkill Academy 2022